Lalàna harena an-kibon’ny tany: dinihina ny famerana ny taha sy ny sarany | NewsMada
Lalàna harena an-kibon’ny tany: dinihina ny famerana ny taha sy ny sarany
Manan-danja lehibe amin’ny toekarena hampandrosoana an’i Madagasikara ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany. Mila paikady mazava sy mirindra anefa izany. Eo am-pamolavolana, ankehitriny, ny fanavaozana sady fanatsarana ny lalàna mifehy azy, ary mandray anjara avokoa ny sehatra voakasika rehetra isan-tsokajiny. Natsangana, ny janoary 2020 teo, ny vaomiera iombonana ahitana ny fiarahamonim-pirenena, ny sendikan’ny mpitrandraka, ny mpitrandraka vaventy, solon-tenan’ny Tranoben’ny harena an-kibon’ny tany, ny mpitrandraka madinika sady teratany ary ny fitantanan-draharaham-panjakana.
Tanjona ny hampitomboana ny fiantraikan’ity sehatra ity amin’ny lafiny toekarena sy sosialy eto amin’ny firenena. Eo koa ny hanamafisana ny fanaraha-maso manoloana ny fitrandrahana gaboraraka hita hatramin’izay, indrindra, hamaivanana ny fikarakarana ny antontan-taratasy ara-panjakana, hanampiana ny mpandraharaha sady hampandraisana andraikitra ny mpisehatra isan-tsokajiny.
Nampitoviana ny fijery
Tsy misy mihitsy ny amboletra avy any amin’ny fanjakana na hevitra teren-ko masaka mandritra ny fifampidinihana. Ao anatin’ny fifandresen-dahatra ny izoran’ny fifanakalozan-kevitra, atao isan-kerinandro. Maro ny dingana efa vita misandrahaka amin’ny lohahevitra samihafa. Isan’ny lehibe amin’izany ny hamerana ny tahan’ny tamberim-bidy sy ny sarany alaina amin’ny fitrandrahan’ny mpitrandraka. Eo koa ny fanomezana ny fahazoan-dalana isan-tsokajiny. Arindra koa ny asa fitrandrahana sy ny lafiny fananan-tany, ny fitandroana ny tontolo iainana, sns.
Ankehitriny, miray feo ny mpidinika ao anatin’ity vaomiera iombonana ity fa tena ilaina ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny harena an-kibon’ny tany. Anisan’ny antony lehibe koa ny fampanarahana araka ny toetr’andro izany lalàna izany, satria maro ny sehatra tokony hampiroboroboana, raha tsy hiteny afa-tsy ny lafiny solika, ohatra.